Amaqumrhu asemthethweni yobhaliso - Zonke abaqondisi-mthetho ehlabathini! Isemthethweni rock kunye abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Inyathelo lesi-woI-umseki okanye umntu ogunyazisiweyo (yi-notary) unako ndwendwela Isemthethweni Iqumrhu Ubhaliso Isebe (State Ubhaliso Igunya, Ukwakha III, ail) kwaye ufumana uxwebhu ukuba siqinisekisa libeke igama isemthethweni qumrhu. (Qaphela: ethandwa kakhulu amabini amagama amaqumrhu asemthethweni kuba sele. esifunyenweyo, ke ngoko imizekelo ka-igama phindo kwaye similarity ingaba kwenzeka. Yiyo loo nto, ubuncinane iinguqulelo igama aziswe, omnye ummi unelungelo kufumana ukuya kwi- amagama ngosuku kwaye isemthethweni iqumrhu kufuneka ebhalisiweyo ngaphakathi kweentsuku ezili- emva yayo ukusekwa.
Inkonzo imali unako kuhlawulwa yi-VISA ikhadi ngomhla ubhaliso hae).
Ubungqina bokuba imali iyafuneka kuba ukusekwa kwe-Company, Cooperative kwaye Association.
Ubungqina bokuba imali ayikho efunekayo ukuze umbutho ongaxhaswa ngurhulumente, ingxowa-Mali, Basebenze Union kwaye Urhulumente umbutho.
(Qaphela: Thabatha igama uqinisekiso iphepha ebhankini, ukuvula i-akhawunti ebhankini kwaye faka imali, aze azise uxwebhu ukuba ubhaliso-ofisi. Kwimeko bengagungqi kwipropati kunye namalungelo awodwa ombhali, isiqinisekiso ubumnini okanye notarized kopa, umthetho we-founding ntlanganiso, utyikityo bonke founding amalungu). Ngowe- inyathelo. Faka afanelekileyo mathiriyali ukuba Isemthethweni Iqumrhu Ubhaliso Isebe kwaye kufumana isiqinisekiso iphepha. (Qaphela: uluhlu kufuneka amaxwebhu, iingcebiso, kwaye isicelo amaxwebhu ayafumaneka burtgel.gov inkonzo. Kwimeko onke amaxwebhu basemazweni ndawo, ubhaliso unako izaliswa ezingama- zomsebenzi. Ubhaliso baya kubekelwa ecaleni ukuba amaxwebhu ingaba engagqitywanga okanye fraudulent. Emva isiqinisekiso ngu ekhutshwe zingaphelanga iintsuku ezingama, ukuba oko kuyimfuneko, nceda ungenise ifom yesicelo kuba tywina). Ngomhla we-umhla ebhalwe kwi uqinisekiso iphepha, nceda tyelela Isemthethweni Iqumrhu Ubhaliso Isebe kwaye khetha phezulu isiqinisekiso sokubhalisa kunye tywina. (Qaphela: Zethu i-arhente cooperates kunye Mongol Ngeposi ukuba LC ukubonelela kuyimfuneko yokuhambisa iinkonzo. Uyakwazi ukuhlawula - MNT e Mongol Ngeposi inkonzo window, ebekwe kwi-LERD, kuba isiqinisekiso ukuba azale ekhayeni lakho okanye e-ofisini. Emva koko, ubhaliso naluphi na utshintsho ziya kuqinisekiswa ngokuchasene xa kuqaliswayo zingeniswe amaxwebhu, ke ngoko, ubhaliso baya kubekelwa ecaleni ukuba utyikityo ngu dissimilar. I-umseki okanye i-umntu ogunyazisiweyo (nge-ID) utyelelo - LERD kwaye ufumana igama uqinisekiso iphepha. Inkonzo imali unako kuhlawulwa kwi-bank, okanye nge-Visa ikhadi kwi nkonzo ye window. Kwi isisombululo oluphezulu umlawuli onyulwe, inkampani umqulu we-kufuneka ikuvumile, kwaye founders kufuneka atyikitye kwi isisombululo. Umseki kusenokuba esinolawulo oluphezulu umlawuli. Kwimeko ngaphezu founders, umzuzu intlanganiso kufuneka zenziwe, kwaye oyintloko intlanganiso kufuneka atyikitye kwi ngomzuzu intlanganiso. Ukuba umseki ngu inkampani, shareholders ka-intloko inkampani kufuneka enze isigqibo malunga foundation kwaye umqulu we-kufuneka ivumile. Kuthetha ka-Inkampani umthetho ekhankanywe kwicandelo. kufuneka olubuyiselweyo ehlangene umqulu we-kwaye samkelwe ngumlawuli founders utyikityo.legalinfo.mn umthetho iinkcukacha Kufuneka azise ipropati isiqinisekiso okanye isivumelwano ka-kukrazulwa. Ukuba umseki kubhalisa yi-ekhaya idilesi kufuneka azise i-ID. Founders kufuneka fumana invested imali kwi-akhawunti yebhanki kwaye azise bank kokuba zifunyenwe. Ukuba idityaniswe yi-iingqiqo ipropati, real ipropati ngoko ke kufuneka ngokucacileyo olubuyiselweyo kwi intlanganiso ummiselo malunga foundation, shareholders kufuneka aqonde kwaye umqondiso kwi ngomzuzu intlanganiso, kanjalo kuzisa ipropati ubunini isiqinisekiso notarized khuphela kwaye isivumelwano ndagqiba phakathi founders notarized. I-umseki okanye i-umntu ogunyazisiweyo (nge-ID) utyelelo - LERD kwaye ufumana igama uqinisekiso iphepha. Inkonzo imali unako kuhlawulwa kwi-bank, okanye nge-Visa ikhadi kwi nkonzo ye window.
Kwi isisombululo oluphezulu umlawuli onyulwe, inkampani umqulu we-kufuneka ikuvumile, kwaye founders kufuneka atyikitye kwi isisombululo.
Umseki kusenokuba esinolawulo oluphezulu umlawuli. Kwimeko kwama- founders, umzuzu intlanganiso kufuneka zenziwe, kwaye oyintloko intlanganiso kufuneka atyikitye kwi ngomzuzu intlanganiso. Ukuba umseki ngu inkampani, shareholders ka-intloko inkampani kufuneka enze isigqibo malunga foundation kwaye umqulu we-kufuneka ivumile. Kuthetha ka-Inkampani umthetho ekhankanywe kwicandelo. kufuneka olubuyiselweyo ehlangene umqulu we-kwaye samkelwe ngumlawuli founders utyikityo.legalinfo.mn umthetho iinkcukacha Kufuneka azise ipropati isiqinisekiso okanye isivumelwano ka-kukrazulwa. Ukuba umseki kubhalisa yi-ekhaya idilesi kufuneka azise i-ID. Founders kufuneka fumana invested imali kwi-akhawunti yebhanki kwaye azise bank kokuba zifunyenwe.
Ukuba idityaniswe yi-iingqiqo ipropati, real ipropati ngoko ke kufuneka ngokucacileyo olubuyiselweyo kwi intlanganiso ummiselo malunga foundation, shareholders kufuneka aqonde kwaye umqondiso kwi ngomzuzu intlanganiso, kanjalo kuzisa ipropati ubunini isiqinisekiso notarized khuphela kwaye isivumelwano ndagqiba phakathi founders notarized.
Uqinisekiso lwe isemthethweni iqumrhu igama MNT ukuba kuhlawulwa ngalo Gloom Bank, Khas Bank.
I-umseki okanye i-ogunyazisiweyo umntu (nge-ID) utyelelo - LERD kwaye ufumana igama uqinisekiso iphepha.
Inkonzo imali unako kuhlawulwa kwi-bank, okanye nge-Visa ikhadi kwi nkonzo ye window. Olululo igama, idilesi, isigqibo malunga foundation, ibhodi amalungu inani lamalungu abe ngaphezu kwaye uneven kufuneka olubuyiselweyo kwi isisombululo kwaye founders kufuneka atyikitye kuyo.
Umseki kusenokuba ilungu ibhodi.
Umqulu we-kufuneka samkelwe ngumlawuli isihlomelo. Ukuba inani umseki ngu- kwaye ngasentla kufuneka senze ngomzuzu intlanganiso kwaye kufuneka watyikitywa-sihlalo intlanganiso. Isampuli ka-umqulu we-foundation kusenokuba layishela phantsi egronjiweyo e burtgel.gov.mn inkonzo Inqaku le,"Umthetho malunga non-governmental umbutho"kufuneka olubuyiselweyo kwi umqulu we. E-ibhodi intlanganiso kufuneka enze isigqibo apho ubonisa malunga unyulo ibhodi isitulo kwaye oluphezulu umlawuli, ibhodi amalungu kufuneka atyikitye kuyo. Ukuba ikhona esweni ibhunga, amalungu ibhunga kufuneka ekhethiweyo kwaye kufuneka zibonakalise ngayo kwi isisombululo inani lamalungu abe ngaphezu kwaye uneven kusenokuba ebhalisiweyo yi - ipropati ilungelo isiqinisekiso, yerente sivumelwano okanye ingafunyanwa ebhalisiweyo yi-umseki ke idilesi yasekhaya ofakwe kwi-ID ikhadi. I-umseki okanye i-umntu ogunyazisiweyo (ne-ID, i-ID kusenokuba ikopi) utyelelo - LERD kwaye ufumana igama uqinisekiso iphepha. Inkonzo imali unako kuhlawulwa kwi-bank, okanye nge-Visa ikhadi kwi nkonzo ye window. Kufuneka zibonakalise efanelekileyo igama, idilesi, isigqibo malunga foundation, igama nefani yegosa ibhodi amalungu (inani lamalungu abe ngaphezu kwaye uneven), umqulu we-kufuneka samkelwe ngumlawuli isihlomelo. Umseki kusenokuba ilungu ibhodi. Ukuba inani umseki ngu- kwaye ngasentla kufuneka senze ngomzuzu intlanganiso kwaye kufuneka watyikitywa-sihlalo intlanganiso.
Nceda musa umqondiso egameni abanye
Inqaku."Umthetho malunga Ngokunxulumene phakathi kukarhulumente, ibandla kwaye monastery", inqaku"Umthetho malunga Non-karhulumente ulungiselelo"kufuneka olubuyiselweyo kwi umqulu we. E.legalinfo.mn Ukuba ingaba ukusebenza umsebenzi kwi-kwiphondo kufuneka kufuneka imvume eyodwa ukusuka kwiphondo elo, ukuba ingaba ukusebenza umsebenzi kwi-esilikomkhulu ngoko bamele ukuba imvume eyodwa ukusuka Esilikomkhulu ibhunga. Kuzisa yoqobo khuphela okanye notarized khuphela le imvume.
Okanye unako kanjalo kuzisa khuphela ne stamp ofuna ke genuine.
Ukuba ingaba vula sebe kufuneka kufuneka imvume evela affiliated ibhunga.
Kuzisa ipropati ilungelo isiqinisekiso okanye yerente sivumelwano.
Ukuba ingaba bhalisa yi-umseki ke idilesi yasekhaya kufuneka azise umseki ke ID ikhadi.
I-umseki okanye i-umntu ogunyazisiweyo (nge-ID) utyelelo - LERD kwaye ufumana igama uqinisekiso iphepha.
Inkonzo imali unako kuhlawulwa kwi-bank, okanye nge-Visa ikhadi kwi nkonzo ye window.
Kufuneka zibonakalise ukuba isigqibo efunyenweyo kwaye cinezela i-media umbutho, kufuneka atyumbe amalungu edition ibhodi inani lamalungu abe ngaphezu kwaye uneven kwi ummiselo kufuneka atyumbe oluphezulu umlawuli oyintloko kwaye umqulu we-kufuneka samkelwe ngumlawuli isihlomelo. Ibhodi amalungu kufuneka atyikitye kwi ummiselo. Cofa i-media kubhalisa njengoko non-inzuzo isemthethweni qumrhu, yiyo loo nto recommend usebenzisa umqulu we-isampuli ezakwa-government umbutho. Kananjalo musa ibonakalisa imisebenzi onenzuzo. Kufuneka kucaciswe xa kwaye ngubani onako atyumbe kwaye yonke imihla amalungu edition ibhodi kwaye oluphezulu umlawuli.
Ipropati ilungelo isiqinisekiso okanye yerente kwesi sivumelwano, ukuba isemthethweni iqumrhu ingaba bhalisa yi-umseki ke idilesi yasekhaya ke umseki kufuneka azise ID ikhadi.
Uqinisekiso lwe isemthethweni iqumrhu igama MNT ukuba kuhlawulwa ngalo Gloom Bank, Khas Bank. I-umseki okanye i-umntu ogunyazisiweyo (ne-ID, kusenokuba ID ikopi) utyelelo - LERD kwaye ufumana igama uqinisekiso iphepha. Inkonzo imali unako kuhlawulwa kwi-bank, okanye nge-Visa ikhadi kwi nkonzo ye window. Ileta esemthethweni malunga ofuna ubhaliso kwaye ubulungu ukuba elinye isebe i-mongolian Basebenza Union. Kuzisa ummiselo ukusuka omnye amasebe i-mongolian Basebenza Union malunga enrollment njengelungu lombutho. Onke amalungu kufuneka babambe intlanganiso malunga foundation, ingaba ngomzuzu intlanganiso, umqondiso kwi isisombululo. Umlawuli we-Sebenza union, iinqununu ngasentla kwaye uneven kufuneka onyulelwe ukuba, umqulu we-kufuneka lixoxiwe kwaye ivumile.
Kwi-umqulu we-kufuneka chaza imeko lokonyula, utshintsho, indima umlawuli neenqununu.
Ukuba izakuba regulated phantsi umqulu we-ka intloko union kufuneka azise ukhuphelo ngasentla umqulu we.
Akukho mfuneko notarize.
Uqinisekiso lwe isemthethweni iqumrhu igama MNT ukuba kuhlawulwa ngalo Gloom Bank, Khas Bank. I-umseki okanye i-umntu ogunyazisiweyo (ne-ID, kusenokuba ikopi ye-ID) utyelelo - LERD kwaye ufumana igama uqinisekiso iphepha. Inkonzo imali unako kuhlawulwa kwi-bank, okanye nge-Visa ikhadi kwi nkonzo ye window.
Founders (inani founders abe ngaphezu) kufuneka vula bank i-akhawunti kwaye azise kokuba zifunyenwe kwi bank ofuna imali ifumaneka kwi-akhawunti.
(Ngokunxulumene inqaku. Umthetho malunga Savings kwaye credit cooperative, ngaphezu - mali apho umseki bavumelana ukutyala imali kwi-isiseko cooperative kufuneka yesebe eqokelelweyo ngemali. Onke amalungu kufuneka bathathe inxaxheba kwintlanganiso, xoxa zilandelayo imiba kwaye yenze isigqibo ngokunxulumene uninzi ivoti kwaye umqondiso kwi isisombululo. Imiba ingaba ngolu hlobo lulandelayo: Ngethuba intlanganiso kufuneka bayigcine ngomzuzu intlanganiso, isitulo intlanganiso kwaye onke amalungu kufuneka umqondiso. Ezi zinto zilandelayo imiba kufuneka olubuyiselweyo kwi-ngomzuzu ye intlanganiso: Ummiselo kwaye umzuzu intlanganiso kufuneka zibonakalise unyulo igqwetha ibhodi kwaye Ibhodi isitulo umlawuli we-cooperative evela kumalungu, kwaye onke amalungu kufuneka atyikitye kwi kwabo. Umqulu we-ngu engundoqo uxwebhu imisebenzi yabo umsebenzi kwaye amanqaku ukusuka. Umthetho malunga Savings kwaye credit cooperative kufuneka olubuyiselweyo kuyo. Kuzisa ipropati ilungelo isiqinisekiso okanye yerente sivumelwano. Ukuba ingaba bhalisa nge omnye umseki ke idilesi yasekhaya kufuneka azise ukhuphelo umseki ke ID ikhadi. Onke amalungu kufuneka babambe intlanganiso malunga foundation approve isisombululo kwaye ingaba ngomzuzu intlanganiso, kanjalo onke amalungu kufuneka atyikitye kwi kwabo. Iyonke isixa-mali ukususela linalo igunya yolawulo umntu kwaye amalungu made ngokubambisana kufuneka olubuyiselweyo kwisisombululo. Isivumelwano ka-foundation iikopi Amalungu kufuneka isicelo sokubhalisa ngaphakathi kwiintsuku ezisi- emva ukuvunywa sivumelwano. Sivumelwano malunga isiseko lwahlulelwano kufuneka kwenziwa ngokunxulumene"Umthetho malunga lwahlulelwano"kwaye kufuneka azise notarized ukhuphelo. Ngokunxulumene uhlobo lwahlulelwano umxholo isivumelwano izakuba ezahlukeneyo, yiyo loo nto nceda ufunde Umthetho malunga Lwahlulelwano xa concluding sivumelwano. Umzekelo: Lwahlulelwano amalungu apho oqhuba-mthetho umsebenzi kufuneka ebhalisiweyo kwi-i-mongolian Bar Association kwaye kufuneka azise ukhuphelo isiqinisekiso. Akukho mfuneko notarize. Ukuba invested ngokuthi imali kuzisa bank ingxelo ye-akhawunti, ukuba invested ngokwemveliso kwaye izinto oku kufuneka olubuyiselweyo kwi-foundation isisombululo kwaye umzuzu intlanganiso, kwaye approve uluhlu eyinkunzi, ixabiso isixa-mali yi-isihlomelo.
Lokumiselwa ukunyanzeliswa iingxoxo
რეგისტრაციის პროცედურები ქონება